Abụla onye mgbasa ozi Malware | Martech Zone
Adịla ịbụ onye mgbasa ozi Malware
Tọzdee, Machị 18, 2010 Tọzdee, Machị 18, 2010 Steve Kremer na -bụ mmadu
E-mail abata. Obi dị gị ụtọ. Ọ bụ azụmahịa CPM dị oke elu site na nnukwu onye mgbasa ozi aha mgbasa ozi. Don't maghị adreesị ozi-e nke onye zitere gị. Think na-eche n’obi gị: “Hmmn..exampleinteractive.com. Ga-enwerịrị obere ụlọ ahịa na-emekọrịta mmekọrịta nke isi akara ahụ na-eji ”. Na-ezigaghachi e-mail na-arịọ maka IO (Ntinye Ntinye) wee bido ileba anya na ngwa ahịa ad gị dị. Na-eso azụ na-eso ha, ha na-echesi ike ka mgbasa ozi ahụ bido ASAP. Ha na-enye elu CPM ma ọ bụrụ na ị nwere ike ibido ya taa. Dị njikere ime ụfọdụ isi $. Ihe niile dị mma. Ma ọ bụ?
Wired News isiokwu: "New York Times Gbanwee Online Ad Sales Mgbe Malware ojoro"
"Onye mere ihe ọjọọ ahụ masịrị dị ka onye mgbasa ozi nke mba ma nyekwa ihe yiri ngwaahịa ziri ezi maka ịre ahịa otu izu,? Onye nkwuchite NY Times Diane McNulty dere. ? Na ngwụsị izu, agbanwere mgbasa ozi ahụ ka ozi mkparịta ụka, na-azọrọ na ịdọ aka ná ntị nje sitere na kọmputa onye na-agụ ya, pụtara.
N'ime ụwa n'ezie enwetala m ozi ịntanetị site na obere ụlọ ọrụ na-emekọrịta mmekọrịta na nnukwu ịzụta site na nnukwu akara. Mgbe emechara nyocha ịntanetị m hapụrụ azụmahịa ahụ. N'ihi gịnị? Ha abụghị ndị ezigbo. Malite na ha “exampleinteractive.com” ngalaba aha.
Ọbụna echere na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ dị mma na ha edeghị adreesị anụ ahụ, enweghị nọmba ekwentị, enweghị ndepụta nke ndị ahịa, enweghị ndepụta nke "akwụkwọ ọcha" ma ọ bụ akụkọ ọma ndị ahịa. Mmehie ma ọ bụ ọtụtụ okwu ebubo abụọ na-ewelite ọkọlọtọ ọbara ọbara. Foto dị n'aka nri bụ ngebichi sitere na saịtị saịtị azụmaahịa kpọtụrụ m. Ndi ụlọ ọrụ na-ere ahịa ziri ezi nke na-anọchite anya nnukwu akara nwere nnomi njehie dị ka nke a na ibe ha?
Mee a onye anya nke aha ngalaba ha. Ogologo oge ole ka e debanyere ngalaba ahụ? Edebara aha ya na China ma ọ bụ ọwụwa anyanwụ Europe otu ọnwa gara aga? Onye nwe ngalaba ahụ edepụtara nwere adreesị ozi-e Gmail ma ọ bụ Yahoo? Ọ bụ na ngalaba na-ezoghị edebanye aha na-enweghị aha? Adreesị ahụ ọ bụ ezigbo n'okporo ámá na ezigbo obodo? Mee a Nyocha Netcraft nke ihe nkesa. Ọ bụrụ na ihe nkesa na-kwadoro na China ma ọ bụ ọwụwa anyanwụ Europe nke kwesịrị ma ọ dịkarịa ala bulie odo ọkọlọtọ.
Jụọ maka W9 ha. Gwa ime nyocha ego. A W9 na SS ma ọ bụ NJ ụtụ isi nke ụlọ ọrụ na nọmba ọnụọgụ na-ezighi ezi dịka ọkọlọtọ ọbara ọbara.
Jụọ maka aha ha kọntaktị na isi ika. Ọ bụrụ na ha nye gị nọmba ekwentị kọntaktị ahụ, ejikwala ya. Kpọọ nọmba ekwentị igodo nke isi ụlọ ọrụ aha ma nyefee ka gị na kọntaktị ahụ kwuo okwu. Enwetara m oku site na kọntaktị ika ozugbo. Akpọ oku gosiri m na US ika kọntaktị na-akpọ m si Bulgaria.
Ederede banyere ihe mere na New York Times nke jikọtara n'elu sitere na Septemba nke 2009. Mana onye na-anwa ịdọrọ otu aghụghọ ahụ kpọtụrụ m n'izu a. Ha ka nọ ebe ahụ mana ị nwere ike izere ọnyà mgbasa ozi mgbasa ozi na saịtị gị site na iwepụta obere oge iji rụọ ọrụ nyocha ndị dị n'ịntanetị.
Tags: OkechukwuPenguin melite
Steve Kremer na -bụ mmadu
Steve na-akọwa onwe ya dị ka "obere mba, a obere bit-rock-n-mpịakọta" dị ka ma a techie na a marketer. Ọ hapụrụ WISH-TV na 1995 ka ọ bụrụ otu n'ime ndị nrụpụta Weebụ Indy na ndị na-ahụ maka ndụmọdụ. N'ime ụzọ ọ rụrụ ọrụ maka mmalite gụnyere iProperty.com, Narrowline, OneCall Internet, Vontoo na ChaCha ebe onye oru # 4 no ugbua ma obu ChaCha Director Of Online Advertsing.
Biko kọwaa ụlọ ọrụ Jargon na Acronyms
Mụkwuo Peeji nke ọ bụla na nleta ma belata mbata ọnụego